United Airlines Yazivisa Nyowani Isingamise Ndege kubva kuUS kuenda kuJorodani
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jorodhani Kuputsa Nhau » United Airlines Yazivisa Nyowani Isingamise Ndege kubva kuUS kuenda kuJorodani
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Jorodhani Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Jordan Tourism Board (JTB) iri kufara kuzivisa nendege itsva yakananga, zvichiita kuti zvive nyore kune vafambi veAmerica kubhururuka kuenda kuJorodani. United Airlines ichapa nendege yakananga kubva kuWashington DC kuenda kuAmman kutanga Chivabvu 5, 2022, uye ichabhururuka katatu pasvondo. Iyi ndiyo yekutanga kutiza nendege kuti ubatanidze maviri makuru maguta.
Ongororo ichangoburwa yeJordani Tourism Board yakapedzisa yakaratidza kuti 2022 yakagadzirira kutyora marekodhi ekufamba kuenda kuDC.
65 muzana yeavo vanoita zvekutengeserana muUnited States vane yekufambisa mabhaisikopo mukudonha kwa2021 kuenda kuJorodani, zvichienzaniswa chete ne15 muzana muzana mwaka wapfuura.
Nemajekiseni akajeka eCOBV aripo munyika yese, vafambi vanofanirwa kunzwa vakasununguka kushanyira Joridhani.
"Tiri kufara kuvhura guta idzva guru kuguta guru, Washington DC kuenda kuAmman, sevhisi, zvichiita kuti zvive nyore kubatanidza vanhu vazhinji kuenda kuJordani uye hupfumi hwenyika netsika izvo nyika inofanira kupa," akagovana Patrick Quayle, Senior Mutevedzeri weMutungamiri Wenyika. Network uye Alliances.
Chiziviso kubva kuUnited chinoratidza kuvimba kwendege kwairi kuenda sezvo mafambiro epasi rose anotanga kutora mushure mekuparadzwa kwedenda. Kufamba uku kunotsigirawo ongororo ichangobva kuitika iyo Jordan Tourism Board yakapedzisa iyo yakaratidza kuti 2022 yakagadzirira kutyora marekodhi ekufambisa kuenda kunzvimbo. Ongororo iyi yakaratidzawo kuti makumi matanhatu neshanu muzana evatengesi muUnited States vaive nemabhaisikopo ekufamba mukudonha kwa65, zvichienzaniswa ne2021 muzana chete mwaka wapfuura.
"Tinofara kugamuchira mutakuri wenhaka kuJordan kuti abatsire kuvhura bhizinesi pakati pemaguta makuru eWashington DC neAmman." Tinogara tichingogamuchira vafambi vemuAmerica kuUmambo kuti vaone tsika nemhando dzakasiyana-siyana dzinowanikwa naJordani. ” Akagovana Abed Al Razzaq Arabiyat, Managing Director weJordani Tourism Board.
"Tiri kutarisira kugamuchira United Airlines kuAmman, uye kushanda pamwechete kuunza kunyange vafambi vakawanda kuti vaone nyika yedu inoshamisa," akadaro Malia Asfour, Director weJordani Tourism Board North America. “Nemitemo yakajeka yeCOVID iripo munyika yese, vafambi vanofanirwa kunzwa vakasununguka kushanyira Jorodhani. Iri idanho rakakura mukubatanidza guta guru reJordani neWashington DC, nekukurudzira vafambi veAmerica kuti vape ruzivo rwekufamba munzvimbo dzine mukurumbira dzakaita sePetra, Wadi Rum uye Gungwa Rakafa. ”
Kuti udzidze zvakawanda nezvenzira nyowani, shanya united.com/en-us/new-routes.
Kuti udzidze zvakawanda nezvezvinoreva enda kuJorodhani shanyira mawebsite visitjordan.com.